Igbo, John: Lesson 097 - Mmụọ Nsọ na-ekpughe ihe ndị mere eme kachasị mkpa (Jọn 16:4-15) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 097 (The Holy Spirit reveals history's developments)
4. Mmụọ Nsọ na-ekpughe ihe ndị mere eme kachasị mkpa (Jọn 16:4-15)
12 Enwere m ọtụtụ ihe m ga-agwa gị, mana ị gaghị enwe ike ịnagide ha ugbu a. 13 Ma mb͕e Ọ bula, bú Mọ nke ezi-okwu, biara, Ọ gēdu unu n'ezi-okwu nile: n'ihi na Ọ gaghi-ekwu okwu n'Onwe-ya; ma ihe ọ bụla ọ nụrụ, ọ ga-ekwu okwu. Ọ ga-agwa gị ihe ndị na-abịa.
Kraist maara ihe nile, ma choro igwa ndi ozo a huru n'anya banyere ihe omimi nke elu igwe na ihe di n'iru, ma ikike nke nkpuru obi na uche apugh imata eziokwu ndia. Ya mere ayi apugh ighota na Kraist neche n'aka nri Chineke n'elu igwe, ma n'otu oge ahu nobi nime obi ayi, ma oburu na echiche nke Mo Nso gaedu ayi. N'otu aka ahụ, anyị enweghị ike ịghọta na Chineke bụ otu n'ime mmadụ atọ. Nke a na ụbụrụ mmadụ enweghị ike ịghọta, ma Mmụọ na-enyere anyị aka na-arịa ọrịa ma na-eme ka uche anyị dị ọhụrụ. O nwere ike ikpughe ihe nzuzo nke ọdịnihu anyị na echiche zoro ezo nke obi, n'ihi na ọ maara ihe nzuzo nke Atọ n'Ime Otu.
Kraist kwuru na Mmụọ nke eziokwu ga-abịa ma duga ha n'ime eziokwu niile. Gịnị bụ eziokwu? Jizos ejigh "otutu eziokwu" di iche iche dika ndi nekwu ihe omuma nke uwa, ma dika ndi ozo, dika mgbe o kwuru, "Mu onwem bu Eziokwu". Nkpughe banyere nbia nke Mmo Nso putara na ogaeduba anyi nime njup ta nke Kraist nime ihe niile. N'ebe Jisos abughi madu, kama Nna no nime ya, ya onwe ya no kwa nime Nna. Ya mere nduzi nime eziokwu nile putara ihe omuma banyere Nna ayi na nragide na ihu n'anya ya na ndu ya rue mgbe ebighebi. Okwu ahụ bụ "Eziokwu" na ozioma apụtaghị eziokwu nke iwu ma ọ bụ ezi nkwado maọbụ ọbụbụ eziokwu nke omume, ma nkọwa ya sara mbara, na-ekpuchi ihe niile, n'ozuzu na kpọmkwem. Ya mere, Mo Nso na-eduga anyị n'eziokwu nke eluigwe ka anyị wee mara Chineke n'ime Atọ n'Ime Otu ma nwee ahụmahụ ebube Ya.Na nke a nile, Mmụọ Nsọ bụ Onye nweere Onwe ya, na-ekwu, na-ege ntị, na nnwere onwe ime nhọrọ, ma n'otu oge ahụ, ọ dịghị eme ihe ọ bụla ma e wezụga uche Nna. Ọ naghị abịa n'echiche pụrụ iche, ma na-agwa anyị ihe Nna ahụ kwuru. Na Atọ n'Ime Otu, ọ dịghị ihe ọ bụla ma e wezụga nrube isi na nnwere onwe nke ịhụnanya. O kwesiri nt kwasi obi n'àmà ah nke okpara site n'aka Okpara Chineke. Ya mere, o choro iwulite ulo ahu dum dika aru Kraist, ka o wee zuo oke n'idibia nke Kraist, nwunye ya.
14 Ọ ga-enye m otuto, n'ihi na ọ ga-anapụta ihe nke m, ọ ga-akọkwara gị ya. 15 Ihe niile Nna m nwere bụ nke m; ya mere m kwuru na ọ na-ewe m, ọ ga-agwakwa gị ya.
Nzube n'azu oru nke Mo Nso bu otuto nke Kraist. Dika Jizos ghari onwe ya ma wezuga nkwanye otuto nye Nna ya nani, otua ka Mo Nso adighi-asọpuru onwe ya, kama o na-enye Jizos otuto n'omume ya nile. Nke a na-akụziri anyị ka anyị ghara ịkọ banyere ahụmịhe, mmeri na omume anyị, kama iji nye Jizọs Onye nzọpụta naanị ya. Ọ bụghị nchèghari anyị bụ nke kachasị mkpa, kama ịsacha mmehie anyị n'ime ọbara dị oké ọnụ ahịa Kraịst. Mmeghari nke Mo Nso, ikike ya na ebumnuche ya nwere otu ihe mgbaru ọsọ, otuto nke Jizos onye zutara ayi maka onwe ya. Mmụọ Nsọ na-arụ ọrụ site na àmà nke ndịozi Kraist n'ụzọ dị irè mgbe ha na-ewetara Kraịst ndị nụ ka a kpogidere ma kpọlite ha n'ọnwụ.
Mmụọ Nsọ adịghị arụ ọrụ ọ bụla n'onwe ya, kama ọ na-emezu ihe Jizọs malitere n'okwu na n'omume. Ọ na-echetara ndị na-eso ụzọ Jizọs okwu, ma wepụta ndụ ya dị n'ime ha. Ọ na-akpali ha ka ha debe iwu ya, na-agbanye ha na Onye Nzọpụta ha. Anyị na-ahụ site n'ebe dị anya otu mmekọrịta dị n'etiti ibe anyị na Nsọ Atọ n'Ime Otu. Otu Onye na-adịghị asọpụrụ onwe ya, ma na-asọpụrụ, na-ewuli onye nke ọzọ elu mgbe niile.
N'oge ozi elu ala ya, Jisos kwuru n 'ịdị umeala n'obi niile, sị, "Nna m ka m karịa", ma n'okwu nkesa ya, ọ sịrị, "E nyere m ikike nile n'eluigwe na n'elu ụwa", n'ihi na Jizọs kere ihe niile n'ime nnwekọrịta nke Nna . Nna bu nke ya, dika nna nile bu umu ya, dika o bu ha.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ị gbapụtara anyị n'obe, wepụ mmehie anyị. Anyị na-ekele gị maka oke ịhụnanya gị. Mee ka Mmụọ Nsọ gị jupụta anyị, ka ndụ anyị niile wee nye gị otuto na mbilite n'ọnwụ gị. Mee ka anyị ghara ịda mbà, ihu abụọ na mpako, ka anyị wee dịrị ndụ n'eziokwu nke àgwà ọma gị.
Olee otú Mmụọ Nsọ si arụ ọrụ n'ụwa?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:38 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)